कांग्रेसको निष्कर्षः निर्मलाको हत्यारा बम दिदीबहिनीलाई मात्र थाहा छ !
मुख्य पृष्ठसमाचार समाजकांग्रेसको निष्कर्षः निर्मलाको हत्यारा बम दिदीबहिनीलाई मात्र थाहा छ !
डोटी, असोज १५
डोटीमा आज एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता वीरबहादुर बलायरले निर्मला पन्तको हत्याराबारे बम दिदीबहिनीलाई मात्र थाहा भएको दाबी गरेका छन् । निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणबारे अध्ययन गर्न कांग्रेसले खटाएको टोलीमा समेत रहेका पूर्वमन्त्री बलायरले निर्मलाका हत्यारा बम दिदीबहिनीबाहेक अरुलाई थाहा नभएको बताएका हुन् ।
पूर्वमन्त्री बलायरले बम दिदीबहिनीबाट सबै खुल्ने दाबी गर्दै यदि निर्मला हराएकै राति बम दिदिबहिनीहरुको घरमा छापा मारेको भए सबै पत्ता लाग्ने बताए । उनले भने, ‘राति नै प्रहरीले छापा मारेको भए निर्मला भरसक जिउँदै नभए शव प्राप्त हुन्थ्यो । तर प्रहरीले राति जान नमिल्ने भन्दै वास्ता गरेन ।’
उनले ठोकुवा दिँदै भने ‘निर्मलाको हत्या त्यही घरमा भएको हो वा जिउँदै कसले लगेको हो, उनीहरुलाई सबै थाहा छ । यो मेरो ठोकुवा हो ।’ उनले भने, ‘निर्मलालाई आफैंले बोलाएर लैजानु र निर्मलाकी आमा खोज्दा जाँदा पोइला गइहोला भन्नु तथा साइकल भेटिएपछि शव पनि भेटिन्छ भन्नु त्यसको आधार हो ।’
यसैगरी उनले थपे, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरुको बचाउ गर्नुले पनि बम दिदीबहिनीमाथि थप शंका लागेको छ ।’